Digital Cutter, Fabric Cutter, Label Cutter - Ameida
Wax-qabad Dheeraad ah oo Dijital ah- Taxanaha B4
Nidaamka jarista dhijitaalka ah ee B4 wuxuu ku ogaan karaa goynta, goynta badh, duugista, shiididda, feeridda iyo buulinta oo leh xawaare sare iyo saxnaan sare.
10 sano oo waayo -aragnimo ah oo ku saabsan jaridda mashiinka
WAXAAD KULA JIRTA TALLAABO KASTA OO JIDKA
Calaamadeeyaha Dhimista - Taxanaha C5
Faa'iidada 1. recti Automatic ...
Calaamadda Dhimashada Qalin -jabiyaha - Taxanaha C3
Faa'iidada 1.Touch screen: S ...
Roll Material magaabay wiil - Taxanaha A11
Faa'iidada 1. Shaashadda taabashada: ...
Function Xawaaraha Sare Sanduuqa guddiga jiingado ...
Taxanaha Ameida B4 wuxuu ahaa naqshad ...
Mashiinka Mashiinka tolidda - Taxanaha A3
* Noocyo kala duwan oo wax lagu qaso ...
Faa'iidada 1. Dareenka infrared ...
Faa'iidada 1.Maqaal otomaatig ah ...
AMEIDA CNC Technology Co., Ltd waxay ku taal Ningbo ee Shiinaha, iyada oo in ka badan 10 sano waayo -aragnimo ku leh beerta mashiinka goynta, waxaan diiradda saarnay horumarinta mashiinka goynta dhijitaalka ah ee ku habboon macmiilkayaga, iyo bixinta xalka goynta deggan ee warshadaha kala duwan. Macaamiishayadu waxay ka yimaadaan warshado kala duwan sida warshadaha calaamadda & daabacaadda, warshadaha baakadaha, warshadaha dharka & dharka, warshadaha alaabta guriga, warshadaha goomaha iwm.
Iyada oo la horumarinayo warshadaha xayeysiiska, baahiyaha daabacaadda ee gaarka loo leeyahay oo aad u badan ayaa ka soo muuqday suuqa, adeegyo kala-duwan oo kala duwan oo khadka tooska ah iyo kuwa tooska ah ayaa iyaguna soo baxay. Gaar ahaan summadaha iyo dhejiska, dufcado yaryar oo la gaaryeelay ...
Faa'iidooyinka Mashiinnada Goynta Midiyaha ee Warshadaha Dharka
Waqtigan xaadirka ah, in ka badan qarni ka dib Kacaankii Warshadaha, suuqa dharku ma aha mid bislaaday oo keliya, laakiin sidoo kale wuxuu noqonayaa mid buuxa. Isla mar ahaantaana, iyada oo si joogto ah loo hagaajinayo heerarka nolosha, sumadaha waaweyni waxay noqdeen adeegsi maalinle ah, oo aan awoodin inay daboolaan baahiyaha dadka raadinaya f ...
Xilliga Qaadashada Bayberry
"Wang Mei" Waxoogaa casaan ah oo buurta qarkeeda ah, Yangmei waa waqtiga Maajo. Waxaan rabaa inaan midhahan soo qaato oo aan tijaabiyo, waxaan necbahay uun inaanan buurtan joogin. Markii aan akhriyay maansadan, waxaan dareemay inaan ka xumahay inaanan buurtan joogin, markaa shirkadda dalxiiska ayaa abaabushay t ...